नेपालमा पहिलोपटक नेपाल सरकार रेलवे नाममा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म रेलसेवा शुरू भएको थियो । तर, पछि यो सेवा पूर्णरूपमा बन्द भयो । त्यसपछि जनकपुर–जयनगर रेलसेवा शुरू भएको हो । यसको लम्बाइ शुरूमा ५२ किमी थियो । यो रेल सेवा शुरूमा जयनगर–जनकपुर हुँदै बिजुलपुरासम्म चल्दथ्यो । पछि विभिन्न कारणले यो जनकपुरदेखि जयनगरसम्म २९ किमीमात्र सञ्चालनमा छ । हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेको यो एकमात्र रेलसेवा हो । मेची महाकाली रेल निर्माण कार्य शुरु भएता जग्गा बिबाद मुआब्जा आदि कारणबश अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
1 विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने नयाँ व्यवस्था
2 नेपालका हिमालहरू
4 क्लाउड सिडिङ (Cloud Sheeding) भनेको के हो ?
6 Climate Change Development Portal के हो ?
7 आदिवासी चलचित्र महोत्सव – २०७४